सेमील्ट: सामग्री स्क्रैपर्स. तपाईंको सामाग्री चोरी गर्ने कोसिस गर्नुहोस्
यदि तपाई ब्लगर वा सामग्री लेखक हुनुहुन्छ भने सामग्री स्क्रैपर्सको बारे सबै कुरा. ध्यान दिनुहोस् कि सामग्री स्क्रैपर्सले तपाईंको वेब सामग्रीलाई उनीहरूको निजी ब्लगहरूको लागि कुनै अनुमति बिना प्रतिलिपि वा चोरी गर्न सक्दछ. केही सामाग्री स्क्रैपर्सहरू तपाईंको ब्लग पोस्टहरू प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस्, र अरूले स्वचालित रूपमा आरएसएस फिडबाट सामग्री लिनको लागी स्वचालित कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्दछ र यसलाई आफ्नै वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुहोस्।. यहाँ हामी वर्णन गर्नेछ कसरी कसरी पत्ता लगाउँदछ तपाईंको वेब सामग्री चोरी गर्ने हो र तपाईले उनीहरूको विरुद्ध कस्ता उपायहरू लिनु हुन्छ.
कसरी पत्ता लगाईएको छ कि तपाईको साइट स्क्रैप गरिएको छ:
जब सम्म तपाईले याहू, बिंग वा Google मा तपाइँका पोस्ट शीर्षक खोज्नु भएन भने तपाईले तपाइँको सामग्री चोर्ने वेबसाइटहरू ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्न। नियमित रूपमा. यदि तपाइँ तिनीहरूलाई स्प्याम मर्स वा हैकरहरू बारे जान्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ निम्न तरिकाहरूमध्ये कुनै पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।.
इन्टरनेटमा तपाईंको सामग्री चोर्ने को फेला पार्न यो सबै भन्दा सजिलो र सरल तरीका हो।. यो कार्यक्रमले तपाइँलाई तपाइँको वेब सामग्रीको यूआरएल प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ र विश्वव्यापी वेबमा यसको प्रतिलिपिहरू फेला पार्न अनुमति दिन्छ. तपाईं या त यसको नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सीमित विकल्पहरू वा प्रीमियम संस्करण जसले तपाईंलाई केही रकमका लागि लगभग 10,000 वेब पेजहरू जाँच गर्न अनुमति दिन्छ.
तपाईं आफ्नो WordPress साइट को ट्र्याकब्याक पनि आफ्नो दैनिक सामग्री को चोरी गर्न साइटहरु को पहिचान र दरार गर्न को लागि पनि कोशिश गर्न सक्छन्. यदि तपाइँ अल्पवाद प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, धेरै ट्रयाकबक्सहरू तपाईंको स्प्याम फोल्डरमा देखाइनेछ. ट्र्याकब्याक पहिचान गर्न र प्राप्त गर्न कुञ्जी भनेको ठूलो एंकर पाठहरूको साथ तपाईंको पोष्टको लिङ्कहरू समावेश छ. तपाईंको साइट अप्टिमाइजेसनको लागि आन्तरिक र बाह्य लिङ्क महत्त्वपूर्ण छ.
3. वेबमास्टर उपकरणहरू:
सामग्री स्क्रैपर्सहरू फेला पार्न अर्को तरिका वेबमास्टर उपकरण प्रयोग गरेर. वेबमा जानुहोस्> तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताको लिङ्कहरू र लिंक गरिएको पृष्ठ स्तम्भमा क्लिक गर्नुहोस्. कुनै पनि वेबसाइट जुन तपाइँको पोष्टहरू लिङ्क गरिएको छ यस क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिनेछ. यस साइटमा तपाईंको आफ्नै लिङ्कहरू पत्ता लगाउन, तपाईंले भर्खरै डोमेनमा क्लिक गर्नु भएको छ र तपाईंको वेबसाइटको कुन लेखहरू चोरी गरिएका छन् भन्ने विवरणहरू पत्ता लगाउनु पर्ने छ।. यहाँ तपाइँ कसरी देख्न सक्नुहुनेछ कि कति राम्रो तरिकाले तिनीहरूले प्रतिलिपि बनाइरहेका छन् र दैनिक पोस्टमा तपाईंको पोष्ट शीर्षक र सामग्री टाँस्दैछन्.
4. गुगल अलर्ट्स:
यदि तपाइँ नियमित रूपमा पोष्ट गरिरहनुभएको छैन र तपाईंको ब्लग पोष्टहरू वा अन्य साइटहरूमा लेखको कुनै पनि शीर्षकको साथ रहन खोज्नुहुन्छ, तपाईले तपाईको लेखको शीर्षकको सही मिलान प्रयोग गरेर Google अलर्टहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। यसलाई उद्धरण चिन्हमा राख्नुहोस्.
स्क्रैपर्ड पोष्टको लागि क्रेडिट पाउनुहोस्:
यदि तपाईंले एक वर्डप्रेस साइट सिर्जना गर्नुभयो भने, तपाईंले आरएसएस फिटर प्लगइन प्रयास गर्नुपर्छ. यसले प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको पाठको अनुकूलन टुक्राहरूलाई तल वा आरएसएस फिड सामग्रीको शीर्षमा राख्दछ. र यदि तपाइँ एक वर्डप्रेस साइटको स्वामित्व छैन भने, तपाइँले भर्खरै तपाइँको सामग्रीको तल वा शीर्षमा छोटो वर्णन वा नोट समावेश गर्नुपर्छ जुन त्यहि जानकारी समावेश छ र राम्ररी उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ।.
सामग्री स्क्रैपिंग कसरी रोक्न?
यदि तपाईं आफ्नो वेब सामग्री चोरी वा प्रतिलिपि गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई केहि उपायहरू लिन आवश्यक छ. सबैभन्दा पहिले, तपाईंले साइट व्यवस्थापकलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ र उसलाई सोध्नु पर्छ कि पृष्ठहरू जहाँ तपाइँको वेब सामग्री प्रतिलिपि गरिएको छ तलको लागी. तपाईले ती लेखहरू तुरुन्तै हटाइदिनु भयो / उहाँलाई समझाउन सक्नुहुन्छ.
यदि प्रशासकलाई सम्पर्क गर्न कुनै उपाय छैन भने तपाईले यो वेबसाइट लुक अप गर्नु पर्छ यो वेबसाइट वा डोमेन नाम को मालिक को खोज्नको लागि. यदि यसलाई व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गरिएको थिएन भने, तपाईंले प्रशासकको इमेल ठेगाना सजिलैसँग फेला पार्न सक्नुहुनेछ. वैकल्पिक रूपमा, तपाईं GoDaddy वा HostGator लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको ध्यानमा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि प्रश्नमा वेबसाइट वा डोमेन नाम लगातार तपाईंको वेब सामग्री चोर्ने छ र यसलाई हटाउन वा निलम्बित गर्न सकिन्छ।.
अन्तिम तर कम से कम, तपाईं DMCA मा जान सक्नुहुन्छ. तपाईंले प्रतिलिपि अधिकार छविहरू, भिडियोहरू, ब्लग पोष्टहरू र सामग्री हटाउनको लागि यसको टेकडाउन सेवा प्रयोग गर्नु पर्छ. त्यहाँ केहि वर्डप्रेस प्लगइनहरू छन् जसले डीएमसीएलाई सुरक्षित ब्याजहरू समावेश गर्दछ, र तपाइँ सम्भावित हैकरहरू र चोरहरूलाई चेतावनी दिन तपाईँको वेबसाइटमा यसलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। Source .